काठमाडौं – होली अर्थात् रंगहरूको पर्व । फागू पूर्णिमाको दिन मनाइने होली यस वर्ष काठमाडौं उपत्यकासहित पहाडी जिल्लामा बुधबार र तराईका जिल्लामा बिहीबार मनाइँदैछ ।
होली पर्वलाई सामान्य मानिसदेखि चर्चित व्यक्तिहरूले उल्लास र उमंगका साथ मनाउँछन् । त्यसमा पनि कलाकारलाई होली राम्रैसँग लाग्ने गर्छ । यसै सन्दर्भमा कलाकार तथा निर्देशक दीपाश्री निरौलासँग लोकान्तर संवाददाता सुशील नेपालले गरेको होली विशेष कुराकानीको सम्पादित अंश :-
होली कत्तिको लागिरहेको छ ?
– होली त मलाई हरेक वर्ष विशेष नै लागिरहेको हुन्छ । मलाई असाध्यै मन पर्ने पर्व पनि हो । अहिले होलीकै तयारीमा छु ।
यस वर्षको होली कहाँ, कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ?
– यस वर्ष म घर (विराटनगर) मा होली मनाउँदैछु । त्यसका लागि म मंगलवार बिहान काठमाडौंबाट हिँड्छु ।
म विराटनगर उपमहानगरपालिकाको सद्भावना दूत भएको हुनाले महानगरपालिकाकै निमन्त्रणमा त्यहाँ जाँदैछु । होली भनेकै सद्भाव बढाउन मनाइने चाड हो । तर उपमहानगरपालिकाको कार्यक्रम भने त्यहाँ पुगेपछि मात्र थाहा हुन्छ । कार्यक्रममा सहभागी हुनुका साथै परिवारका सदस्य, छरछिमेक, आफन्त, साथीहरूसँग घुलमिल भई होली मनाउँछु ।
अर्को कुरा विगत ५–६ वर्षदेखि विराटनगरमा होली मनाउन पाएकी थिइनँ । त्यसकारण पनि यस वर्षको होली मेरा लागि विशेष छ ।
होलीको कुन पक्ष तपाईलाई बढी मन पर्छ ?
– होली सद्भाव र आत्मियता बढाउने पर्व हो । सबै साथीभाईसँग भेट हुने अवसर मिल्छ । होलीमा रमाइलो लाग्ने भनेको रंग लगाएपछिको विचित्र हुने अनुहार पनि हो । एकले अर्कोको मुख हेरेर निकै हाँसो उठ्छ ।
मन नपर्ने पक्ष नि ?
– पहिला म अलि बढी नै ‘वाइल्ड’ तरिकाले होली खेल्थें । तर आजभोलि होलीमा कसैको इच्छाविपरीत रंग लगाइदिने, पानी छ्याप्ने गरेको मन पर्दैन । अविर लगाइदिउँ भनेर लगाइदिएको पो सद्भाव व्यक्त भयो त ! तर आजभोलि यस्ता विकृतिहरू पनि कमी हुँदै गएको छ ।
ठ्याक्कै होली खेल्न थाल्नुभएको अर्थात् पहिलोपटक होली खेलेको सम्झना छ ?
– म त सानैदेखि होली खेल्थें । मेरो बुवाले नै कालो कराईमा तोरीको तेल हालेर मोसो बनाएर लगाइदिनुहुन्थ्यो । बिहान सुतिरहेको भएपनि बुवाले नै होली खेल्न उठाउनुहुन्थ्यो ।
ठ्याक्कै पहिलोपटक होली खेलेको सम्झना त छैन तर सानै उमेरदेखि होली मनाउन थालेकी हुँ । घरमा होली निकै उल्लासमय तरिकाले मनाउँदै आएका छौं । म तराईमा जन्मेको भएर होला होली असाध्यै विशेष लाग्छ ।
त्यो बेलाको होली र अहिलेको होलीमा के फरक पाउनुहुन्छ ?
– त्यो बेला एउटा सर्वसाधारण नागरिक भएर खेलिन्थ्यो । अहिले कलाकार भएर खेलिन्छ । अर्को कुरा पहिला–पहिला विराटनगरमा हामीहरू अत्यन्त धेरै ज्यादति तरिकाले होली खेल्थ्यौं । जस्तो कि गोबर मुखमा लगाइदिने, मानिसलाई पानीमा डुबाउने, भाङको घोट्टा अलि धेरै नै खाने आदि ।
म पनि सानो उमेरमा लहलहैमा लागेर धेरै होलीहरू खेलें । तर अहिले धेरै संयमित भएर खेल्छु । अहिले जबर्जस्ती लोला हान्ने, पानी फ्याक्नेजस्ता क्रियाकलापमा प्रतिबन्ध लगाएपछि धेरै राम्रो भएको छ । तर विकृति कम भएपनि मौलिकता चाहिँ हराएको हो कि जस्तो लाग्छ ।
तराईको होली र काठमाडौंको होलीमा भिन्नता के देख्नुहुन्छ ?
– मलाई त तराईकै होली रमाईलो लाग्छ । तराईमा घरघरमा मटका राखेर होली उत्सवलाई एकदमै रंगीन बनाइन्छ । काठमाडौंमा खाली मिडियाहरूमा गएर मात्रै होली मनाइन्छ, इभेन्ट होली मनाइन्छ ।
विराटनगरमा घरघरमा गएर होली खेल्नुको मज्जा नै फरक लाग्छ । त्यसले माया, सद्भाव साटासाट गर्न पाइन्छ । उता मनाइने होलीमा छुट्टै मिठास र आफ्नोपन पाउँछु ।
होलीको त्यस्तो कुनै अविस्मरणीय घटना सम्झनुहुन्छ ?
– त्यस्तो घटनाहरू त धेरै छन् । पहिला–पहिला म ‘वाइल्ड’ होली खेल्ने भएको हुनाले पनि प्रायः होली अविस्मरणीय नै रहे । १०–१२ वर्षअगाडि होला, काठमाडौं आउने जाने भइरहन्थ्यो ।
होलीको दिन मैले भाङको घोट्टा खाइसकेको थिए । त्यो वर्ष घरमा बहिनी–ज्वाइँ होली खेल्न आउनुभएको थियो । मलाई भाङको नशा लागिसकेको थियो । अनि मैले ज्वाइँको मुखमा गोबर दल्न पुगिछु । ज्वाइँ एकदमै रिसाउनुभयो । उहाँ त्यसको १ वर्षसम्म मसँग बोल्नुभएन । अर्को वर्षको होलीमा मात्र उहाँ मसँग बोल्नुभयो । त्यो घटना म सधै सम्झिरहन्छु ।